Vivo Nex 3 iyo Nex 3 5G hadda waa rasmi: astaamaha iyo qiimaha | Androidsis
Vivo NEX 3 iyo NEX 3 5G durba waa rasmi: ogow astaamahooda, qeexitaanadooda iyo qiimahooda
Calanka cusub ee Vivo ayaa ugu dambeyn la bilaabay, Mid ka mid ah soo saarayaasha casriga ee ugu caansan Shiinaha taas oo ka dhigeysa in badan oo suuqa ka mid ah iyadoo mobilada wata. Saldhigyada cusub ee aan hada ka hadlayno waa kuwa horay loogu xaman jiray inay yiraahdaan "mar dambe", waana Vivo NEX 3 iyo NEX 3 5G.
Qalabkaan kalsooni Waxay ku yimaaddaan shaashadda la filayo ee xiisaha leh oo aad u xiisa badan geesaheeda taas oo ka dhigaysa saamiga shaashadda-jirka ku dhowaad 100%. Laakiin si fiican, faahfaahinta astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee kuwan waxaan hoos ugu ballaarinaynaa.
1 Dhammaan wixii ku saabsan Vivo NEX 3 iyo NEX 3 5G
Dhammaan wixii ku saabsan Vivo NEX 3 iyo NEX 3 5G
Waxaan ku noolahay NEX 3 5G
Sida aan filayno, Vivo waxay soo saartay nooc ka mid ah NEX 3 oo leh isku xirnaanta 5G. Labada noocba waxay wadaagaan ku dhowaad dhammaan qeexitaannada kale ee dhammaan qeybahooda, marka laga reebo RAM iyo ROM, maadaama lagu bixiyo qaabab kala duwan.
Waxa ugu cajiibka badan ee ku saabsan boosteejooyinkan ayaa ah shaashadda ay leeyihiin. Kani waa guddi AMOLED ah oo ah 6,89-inji oo leh FullHD + xal ah 2,256 x 1,080 pixels. Waad ku mahadsan tahay dhinacyada geesaha leh ee isku mid ah iyo kuwa aad u yar ee muraayadaha sare iyo hoose ee haya, saamiga shaashadda-jirka ayaa ah 99,6%, taas oo ka dhigaysa in loo yaqaan 'Infinity Display', in kastoo ereyga ay ku doorteen saxiixa waa «Cascade screen».
Waxaa jira go'an ah dareemayaasha cadaadiska dhinacyada shaashadda si aad uhesho mugga awoodda iyo badhamada korantada, sidaasna kula wadaagaya kuwa jirka ah. Kuwani, sida ku xusan ballanqaadka ay sameeyeen, waxay yareeyaan dhacdooyinka taabashada shilalka ama wajiga waxayna ku jawaabi karaan gariir yar.
Dhinaca kale, labada Vivo NEX 3 iyo NEX 3 5G labaduba waxay leeyihiin Snapdragon 855 Plus gudaha. Si kastaba ha noqotee, sida la qiyaasi karo, moodeelka ugu horreeya ee la soo sheegay wuxuu kaliya bixiyaa taageero illaa 4G, halka kan labaadna uu la jaan qaadayo illaa 5G shabakadaha NSA. NEX 3 waxaa lagu soo bandhigaa UFS 3.0 RAM iyo ROM oo leh 8 iyo 128 GB; NEX 3 5G, dhanka kale, wuxuu ku yimaadaa xulashooyinka soo socda: 8/256 GB iyo 12/512 GB. Waxay wataan 4,500 mAh baytari awood leh oo leh taageero si dhakhso ah loogu soo oogo 44 watts.
Waxyaabaha kale ee Vivo NEX 3 5G uu kaga soocan yahay nooca caadiga ah waa nidaamka qaboojinta ee ay wadato, taas oo ah qaboojinta induction. Nex 3 ma laha muuqaal kuleylka looga hortago, sidaa darteed uma fiicna ciyaaraha sida walaalkiis ka weyn.
Muuqaalka kale ee labada casriga ah ayaa ah anteeno laba-geesood ah oo Wi-Fi ah. Tan, waxay si isku mid ah ugu xirmi karaan kooxaha 2,4 GHz iyo 5 GHz ee shabakad kasta oo Wi-Fi ah, ama Wi-Fi iyo shabakadda mobilada si ay had iyo jeer u isticmaalaan midka ugu awoodda badan, oo loogu talagalay marka mobiilku uu ogaado awoodda calaamaddu hoos u dhacdo.
Sida qaybta sawirada, Waxaa xusid mudan inay jiraan xirmooyin wareegsan oo kuwan gadaashiisa ah, kaas oo ka kooban 64 MP shidma kamarad weyn, 13 MP mid labaad oo bixiya tallaallo xagal ballaadhan oo leh aragti 117 ° ah iyo seddexaad saddexaad oo ah muraayadaha telephoto oo fuliya 13 MP sawirro, iyo sidoo kale LED toosh. Sawirro iskaa wax u qabso ah iyo in ka badanba waxaa jira toogte 16 megapixel ah oo ku jira nidaam dib looga noqon karo oo waliba leh iftiin LED ah.
MUUQAAL 6.89-inch Super AMOLED oo leh FullHD + xallinta 2.256 x 1.080 pixels
PRORESOR Qualcomm Snapdragon 855 Plus
CHAMBERS Gadaal: 64 MP + 13 MP 117 ° xagal ballaadhan + 13 MP telephoto Xagga hore: 13 MP
BATARY 4.500 mAh oo si dhakhso leh loogu soo oogayo 44 »
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 9 Pie oo ka hooseeya Funtouch OS 9.1
Isku xirnaanta Dual SIM / Wi-Fi ac / Dual Wi-Fi / GPS / NFC / 5G nooca
MUUQAALO KALE Shaashadda Sawirka Sawirka / Aqoonsiga Wejiga / USB-C (USB 3.0 Gen 1) / 3.5mm Jack / Qaboojinta Qaboojinta (nooca 5G)
Qiyaasaha iyo Miisaanka 167.44 x 76.14 x 9.4 mm iyo 217.3 garaam
Bishan Sebtember 21, kaliya suuqa Aasiya iyo Baasifiga, Vivo NEX 3 ayaa la iibin doonaa. Helitaanka qaybaha kale lama oga, laakiin waxay u badan tahay in lagu dhawaaqi doono maalmaha ama toddobaadyada soo socda. Dhanka kale, kuwani waa qiimaha iyo noocyada lagu shaaciyey suuqa Shiinaha:
Vivo NEX 3 4G (8/128GB): 4.998 yuan (640 yuro ama 705 doolar sarifka).
Vivo NEX 3 5G (8/256GB): 5.698 yuan (730 yuro ama 804 doolar sarifka).
Vivo NEX 3 5G (12/256GB): 6.198 yuan (794 yuro ama 874 doolar sarifka).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Vivo NEX 3 iyo NEX 3 5G durba waa rasmi: ogow astaamahooda, qeexitaanadooda iyo qiimahooda
OPPO Reno Ace horeyba wuxuu u haystay taariikh rasmi ah oo soo bandhigid ah
Samsung waxay mideyn kartaa kala duwanaanshaha Galaxy S iyo Galaxy Note